စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဆားလင်းကြီး မြို့နယ်၊ မိုးကြိုးပြင်အုပ်စုတွင် ရေနစ်သေဆုံးမှုသတင်း
by MFSD Admin 1 | Mar 15, 2019 | ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး, သတင်း
(၁၄. ၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၁ ၃၇)အချိန်ခန့်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ မိုးကြိုးပြင်အုပ်စု၊ ဖောင်းတား(လ)ရွာတွင် (စိတ်ဝေဒနာရှင်)သည် နေအိမ်မှ ထွက်ခွာပြီး ဝမ်ပေါင်ကုမ္မဏီ တောင်ဘက်ပိုင်း အနောက်ဘက်ခြံစည်းရိုး အပြင်ဘက် အကျယ်(၁၅၀ပေ၊ အနက်(၁၅)ရှိ ရေမြောင်းထဲသို့...
ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘောလခဲမြို့နှင့်(၁) မိုင်ခန့် အကွာ၊ လွိုင်ကော် - မော်ချီးသွားကားလမ်း ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုသတင်း
by MFSD Admin 1 | Mar 12, 2019 | ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး, သတင်း
(၇.၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၀၅ ၄၅)အချိန်ခန့်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘောလခဲမြို့နှင့်(၁) မိုင်ခန့် အကွာ၊ လွိုင်ကော် - မော်ချီးသွားကားလမ်းတွင် Canter အမျိုးအစား(အဖြူရောင်) ၆ ဘီး ကုန်တင်ယာဉ်သည် ဘိလပ်မြေအိတ်များ၊ ကုန်စုံပစ္စည်းများသယ်ဆောင်၍ ထွက်ခွာလာစဉ် မိုင်တိုင် အမှတ်( ၂၁၈...
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ယာဉ်တိုက်မှုသတင်း
by MFSD Admin 1 | Mar 7, 2019 | ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး, သတင်း
(၅.၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၂၀ ၃၀)အချိန်ခန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် အနီး တောင်ကြီး-ဟိုပုံးကားလမ်းတွင် ပင်းပက်သံမဏိ စက်ရုံဘက်မှ တောင်ကြီးမြို့ဘက်သို့ ဆိုင်ကယ် ယာဉ်မောင်း မောင်ယဉ်ထွေး မောင်းနှင်လာသည့် ဆိုင်ကယ်အမှတ်(…
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၇၇/၃)နှင့် (၇၇/၄)ကြား မော်တော်ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုသတင်း
by MFSD Admin 1 | Mar 6, 2019 | ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး, သတင်း
(၅. ၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၀၆ ၀၀)အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၇၇/၃)နှင့် (၇၇/၄)ကြားတွင် ကလေးမှ ရန်ကုန်သို့ ယာဉ်မောင်း ကိုဝင်းထွန်း မောင်းနှင်လာသော ယာဉ်အမှတ်(8G-4574) YUTONG အမျိုးအစား (အနီရောင်) ရန်ကုန်-ကလေ…